I-Eagle Bay Beach Cottage
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDavinia
Ibekwe kwibhlokhi yetyholo elizolileyo iimitha ezingamakhulu ambalwa ukuya kumanzi acwengileyo e-Eagle Bay le ndlu yaselunxwemeni ingasese inazo zombini iindawo zokuhlala zabucala kunye nezibonelelo zendawo engaselwandle.
Ukulala ubuninzi babantu aba-6, le Cottage ilungile kusapho oluncinci okanye iqela labahlobo abafuna ukufumana amava omabini kunye nolwandle kwenye.
I-Eagle Bay Beach Cottage inegumbi lokuphumla elibanzi kunye nendawo yokuhlala enendawo yomlilo yangaphakathi, igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa kunye nekhitshi, amagumbi okulala ukumkanikazi kunye nebalcony yangaphandle ebanzi.
Yonwabela ikofu yakho yasekuseni kwibalcony ngelixa uzonwabisa ngobuhle bendalo le ndawo ikhethekileyo inokubonelela.
Impahla yokuqalisa yeeNdwendwe esisiseko inikezelwe (malunga neentsuku ezi-2 zephepha langasese, izixhobo zasekhitshini njl.njl)
Nceda uqaphele idiphozithi yomonakalo ye-$ 500 ibangelwa xa ubhukisha kunye ne-ID yesithombe
Zombini kufuneka zithunyelwe ngaphambi kokufumana iinkcukacha zokufika
I-3x yesifudumezi se-oyile elungiselelwe amagumbi okulala
Iziko lokhuni lokufudumeza okuphambili endlwini
Nceda uqaphele ukusukela nge-7/12/2020 i-AIRBNB ngoku ihlawulisa umninikhaya umrhumo wokubhukisha we-18.5% endaweni yondwendwe. Lo mrhumo wongezwe kwiindleko zokubhukisha njengentlawulo yolawulo. I-AIRBNB itsala i-18.5% kwixabiso lasebusuku, kwintlawulo yokucoca kwaye kwakhona kumrhumo wethu wolawulo.
4.56 · Izimvo eziyi-91
Umbuki zindwendwe ngu- Davinia
Izimvo eziyi-5 762